AuthorRank ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ Martech Zone
AuthorRank ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ
သောကြာနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2012 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါသည်ငါ့ clients များ pestering ခဲ့ကြရတယ် ရေးသားသူကုဒ်ပေါင်းစပ် ကျွန်ုပ်တို့၏ WordPress ဆိုဒ်များအားလုံးကိုကြည့်ပြီးကတည်းက မယုံနိုင်စရာရလဒ်များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာလုပ်နေတာ၏ ဤတွင်ဝဘ်ဆိုက်ရေးသားခြင်းကို ပိုမို၍ အထောက်အကူပြုရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ AuthorRank.
ပျမ်းမျှစာရေးသူ၊ စျေးဝယ်သူသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူအတွက်၊ AuthorRank သည်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်းအရည်အသွေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီကိုတာဝန်ယူစေသည်။ အကြောင်းအရာအရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ခြင်းသည်ဂူဂဲလ်၏အလုပ်ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်သို့ရွေ့လျားခြင်းသည်ဂူးဂဲလ်သည်စာရေးသူများ၏အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ရန်ကြိုးစားသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ယခု AuthorRank ကိုနားလည်ခြင်းအားဖြင့်၊ စာရေးသူများသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်သူတို့၏စုစည်းထားသည့်လုပ်ငန်းခွင်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခံထိုက်သည်ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ BlueGrass မှသတင်းအချက်အလက်များ။
Tags: စာရေးသူစာရေးသူလင့်ခ်စာရေးသူစာရေးသူရိုးရာကျေးလက်တေးဂီတbluegrass စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းrel စာရေးသူserp
စစ်တမ်းကောက်ခံသောကုမ္ပဏီ၏ထက်ဝက်သည် Google+ စာမျက်နှာရှိသည်
21:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 51 တွင်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် rel = "author" မည်သို့အသုံးချနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိချင်ပါသည်။
21:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 55 တွင်
မင်္ဂလာပါ @carrinli: disqus! စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏စာရေးသူများကိုထင်ရှားစွာပြခြင်းဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးသည်အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ ရေးသားထားသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားလေ့ရှိပြီး၎င်းသည် bot သို့မဟုတ် spam ဆိုဒ်မဟုတ်ကြောင်းကိုတွေ့သောကြောင့်ပိုမိုမြင့်မားလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှလာရောက်သူများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ စာရေးသူ link ကိုလက်ခံကျင့်သုံးပြီးကတည်းက search engine မှကျွန်ုပ်တို့၏ blog post များသို့ ၀ င်ရောက်လာသောလူများ၏သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
ဧပြီ 4, 2012 မှာ 4: 52 pm တွင်
ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး - ကျွန်ုပ်တို့အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင် အသုံးပြု၍ ဗီဒီယိုကိုထည့်နိုင်ပါသလား။ သို့မဟုတ်ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲ။ တကယ်ပဲအေးမြတယ်၊ BTW - တကယ်တော့ပူပြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခု။
ဧပြီ 4, 2012 မှာ 5: 14 pm တွင်
Infographics ကိုမျှဝေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်၊ Jeanette! ဒီအထူးသဖြင့် BlueGrass ကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့ကမျှဝေကြတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်ဆိုဒ်မှသူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောလင့်ခ်ပြန်ထားပါ။